Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Kia Niro ọhụrụ na-eme mpụta mbụ n'ụwa
Ụlọ ọrụ Kia ekpughere Niro ọhụrụ taa na nke mbụ ya na 2021 Seoul Mobility Show, nke na-achọ ime ka onye ọ bụla nweta njem na-adịgide adịgide.
Niro ọhụrụ ahụ na-egosipụta mkpebi Kia n'ịwulite ọdịnihu ga-adigide karị. Dị ka akụkụ dị mkpa nke Kia si na-eto eto eco-enyi na enyi ahịrị, ọhụrụ nlereanya ga-amasị mgbagwoju mkpa nke nkwado nkwado-eji ọkụ.
N'ịbụ nke emezigharịrị kpamkpam site na ala elu, emebela Niro ọhụrụ n'okpuru nkà ihe ọmụma ụlọ ọrụ Opposites United, na-emezu ethos 'Joy for Reason'. Ọ na-achọ mkpali sitere na okike ọ bụghị naanị na imewe kamakwa na nhọrọ nke agba, ihe na imecha iji nweta nguzozi zuru oke n'etiti usoro nlekọta gburugburu ebe obibi na echiche ga-eme n'ọdịnihu.
Mmetụta siri ike nke echiche Habaniro nke afọ 2019 pụtara ìhè na mpụta Niro nwere ọdịdị mara mma na nke siri ike yana ahụ ụda olu abụọ dị elu. Ogidi sara mbara dị n'azụ na-eme ka ikuku na-erugharị dịkwuo mma iji meziwanye ikuku ikuku ma na-agwakọta n'ime ọkụ azụ dị ka boomerang.
Agbanwela mbinye aka Kia 'ihu agụ' maka Niro ọhụrụ ma ugbu a si na mkpuchi ahụ gbatịa, ruo n'okirikiri mgbada dị n'okpuru. Emechara n'ihu ihu dị ugbu a site na 'obit' LED DRL (ọkụ na-agba n'ehihie) nke na-emepụta ntụkwasị obi na anya dị egwu n'okporo ụzọ.